M/weynaha Puntland oo kala diray maamulkii gobolka Mudug, mid cusubna magacaabay. – Radio Daljir
M/weynaha Puntland oo kala diray maamulkii gobolka Mudug, mid cusubna magacaabay.
Garowe, Aug 24 – Digreeto goordhawayd ka soo baxday xafiiska M/weynaha Puntland Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud ‘Faroole ayaa lagu kala diray maamulkii gobolka Mudug iyadoo maamul cusubna loo magacaay gobolka.
Digreetada m/weynaha oo ku taariikhaysnayd maanta oo bisha August tahay 24, lambarkeedu ahaa 70, ayaa kala dirista maamulkii Maxamuud Cabdiraxmaan Cuuke kaddib lagu magacaabay maamulka cusub ee gobolka iyo kan degmada Galkacyo, waxaana guddoomiyaha gobolka Mudug loo magacaabay Maxamed Yuusuf Jaamac ‘Tigay.
Digreetada m/weynaha waxaa sidoo kale lagu magacaabay labo guddoomiye ku-xigeen oo uu yeelanayo gobolka Mudug, waxaana guddoomiye ku-xigeen 1-aad loo magacaabay Farxaan Cali Xirsi oo horay isla guddoomiye ku-xigeen ugu ahaa maamulkii la kala diray.
Guddoomiye ku-xigeenka 2-aad ee gobolka Mudug waxaa loo magacaabay Axmed Muuse Nuur oo horay guddoomiye ku-xigeen uga ahaan jiray golihii deegaanka Galkacyo ee la kala diray.
Digreetada m/weynaha waxaa sidoo kale maamul KMG ah loogu magacaabay degmada Galkacyo, waxaana duqa degmada laga dhigay Siciid Cabdi Faarax, halka ku-xigeenkiisuna uu yahay Daahir Maxamuud Muuse, kuwaasi oo xilka hayn doono inta laga dhisayo gole deegaan.
Maamulka maanta la kala diray waxaa uu xilka maamulka gobolka iyo midka degmo isku-haystay muddo todobo bilood ah, waxaana horay loogu magacaabay si kumeel gaar ah kaddib markii sidaan oo kale la kala diray maamulkii gobolka iyo midkii degmadaba.
Gobolka Mudug muddo dheer waxaa ragaadiyey dibna u dhigay maamul xumo baahsan iyo is-maandhaaf dhaqan iyo caado u noqday hay’adaha dawliga ah ee heer gobolka iyo mid degmo ee ka hawlgala gobolka Mudug, taasoo horseed u noqotay ammaan-darrada iyo aayo-xumada gobolka soo food-saartay, mana cadda waxa maamulka cusub uu baddali doono iyadoo inta badan la tilmaamo halka sartu-ka-qurunsan tahay in ay tahay dhinaca ciidamada.